EURO 2016: Group D, Croatia oo si lama filaan ah ugu soo baxay kaalinta koowaad, xulka xafidanaya Euro ee Spain oo labaad helay..(Goolhaye Petr Cech oo sameeyay rikoodh fool xun)+SAWIRRO – Gool FM
EURO 2016: Group D, Croatia oo si lama filaan ah ugu soo baxay kaalinta koowaad, xulka xafidanaya Euro ee Spain oo labaad helay..(Goolhaye Petr Cech oo sameeyay rikoodh fool xun)+SAWIRRO
(France) 21 Juunyo 2016. Xulka Croatia ayaa si lama filaan ah ugu soo baxay group D kaddib markii ay 2-1 ku dubteen xulka xafidanaya Euro ee Spain, halka xulka laga adkaaday uu ku soo baxay kaalinta labaad.
Dhanka kale xulka Turkiga ayaa gaaray guushoodii ugu horreysay iyagoo 2-0 uga talaabsaday xulka Czech Republic isla markaana soo xirtay kaalinta saddexaad.
Qeybtii hore ee ciyaarta xulka Spain iyo Croatia ayaa lagu kala nastay 1-1.
Xulka Spain ayaa waxaa hogaanka u dhiibay dhaliyaha dib ugu soo laabtay dhawaan kooxda Real Madrid ee Alvaro Morata kubbad uu soo dhisay Silva oo uu u dhiibay Fabregas oo isna kubbad hoo I dhali ah farta u galiyay Morata daqiiqadii 7-aad ee ciyaarta, waana goolkii saddexaad uu ka dhaliyo tartanka ilaa iminka.
Waa caawintii shanaad uu sameeyo Fabregas tartanka Euro waana inta ugu badan uu sameeyo laacib ka soo jeeda Spain.
Dhammaadka qeybtii hore ee ciyaarta xulka Croatia ayaa goolka bar-baraha ka heshay flop-ka Blackburn Rovers Nikola Kalinic karoos uu ka helay Perisic ayuu ku taabtay goosha wax u muuqday inuu cirib ku dhaliyay.
Waa goolkii ugu horreeyay ee laga dhaliyo xulka Spain tartanka Euro tan iyo goolkii uu ka dhaliyay weeraryahanka xulka Talyaaniga ee Di Natale 10-kii bisha June 2012.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Spain ayaa loo dhigay rigoore ay saxnaanshaheedu saxnayn kaddib markii uu Sime Vrsaljko si tartiib ah u riixay Silva uu diilinta ganaaxa ku riday daqiiqadii 72-aad.
Malaha cadaaladii ayaa adeegtay oo waxaa rigooradii laga bixiyay Sergio Ramos.
Croatia ayaa hogaanka qabatay dhammadkii ciyaarta daqiiqadii 87-aad waxaana kubbad rogool celis ahayd uga faa’iideeyay Ivan Perisi oo maray goolhaye De Gea.
Waa ciyaartii ugu horreysay ebid ee laga adkaado xulka Spain tartanka Euro iyagoo gool ku hogaaminayo kulanka.
Croatia ayaa kaalinta koowaad 7-dhibcood ku soo baxday halka Spain ay 6-dhibcood leedahay.
Dhanka kale ciyaartii xulalka Turkiga iyo Czech Republic ayaa lagu kala nastay qeybtii hore 1-0.
Xulka Turkiga ayaa waxaa hogaanka u dhiibay dhaliyahooda Burak Yilmaz bilowga ciyaarta daqiiqadii 10-aad kubbad uu cag jaran kor marsiiyay goolhaye Cech.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Turkiga ayaa goolkoodii labaad ka helay xiddiga qadka dhexe ee Ozan Tufan.
Tufan ayaa waxaa si wayn u dhaleeceynayay saxaafadda dalkiisa kaddib markii lagu eedeeyay inuu tintiisa ku mashquulsanaa oo uu salaaxanayay markii uu goolka ka dhalinayay Luka Modric ciyaartii ay guul darrada kala kulmeen xulka Croatian xilli uu taagnaa meel u dhow.
Rugcadaagii Chelsea ee iminka shabaqa u ilaaliya Arsenal Petr Cech ayaa rikoodh fool xun ka sameeyay Euro kaddib markii laga dhaliyay 21-gool intii uu shabaqa u ilaalinayay xulkiisa Czech Republic waana in kabadan goolhaye kasta oo kale taariikhda tartankan.
GOOGOOSKA: Croatia vs Spain 2-1, Czech Republic vs Turkey 0-2 (Croatia oo Spain ka yaabisay)
TOOS u daawo: USA vs Argentina - LIVE (Nus-dhamaadka Koobka Ameerika)